Mamoaka ny Sarin’ireo Mpanao Fihetsiketsehana Hosamborina Ny Manampahefana Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Mamoaka ny Sarin'ireo Mpanao Fihetsiketsehana Hosamborina Ny Manampahefana Iraniana
Voadika ny 04 Jolay 2017 1:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, Italiano, English
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Jiona 2009 ity adika eto ity)
Lasibatra ao amin'ny tranonkalan'ny Mpiambina ny Revolisionera Islamika ankehitriny ireo Iraniaina mpanao fihetsiketsehana hita niparitaka be tamin'ny sary antserasera ka nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana taorian'ny fifidianana tao Iran.
Antsoina hoe Gerdab (midika hoe ‘tadio’) ny tranonkala ary ny Foibem-baovaon'ny Mpiambina ny Revolisionera Islamika misahana ny Fanadihadiana ny Andian-Jiolahy no tompony. Mampiseho sarin'olona miisa 20 ny tranonkala ary voahodidina loko mena ny tavan'izy ireo, tsy misy porofo raha nandray anjara tamin'ny “korontana” tao Tehran izy ireo na tsia.
Asaina ireo olom-pirenena mba hiantso na handefa mailaka raha mahita ireo olona ao amin'ny sary. Nilaza ihany koa ny Gerdab fa efa voasambotra ny roa tamin'ireo olona ireo. Tsy manome vaovao fanampiny momba ireo olona voafaritra ireo ny tranonkala.
Namerina namoaka ny sary ireo bilaogera Islamista sasany.
Mandritra izany, namoaka sary maromaro misy ny sarin'ireo mpitandro ny filaminana Iraniana ary indrindra ireo polisy misaron-tava ahiahiana, ary mangataka amin'ny olom-pirenena mba hanampy hamantatra azy ireo ireo mpanohana ny hetsi-panoherana.
Ohatra, misy sary iray ahitana polisy ahiahiana ho namoaka basy tao amin'ny fehin-kibony, tao ambadiky ny moto. Bilaogera maromaro ihany koa no nizara sarina polisy ahiahiana, mangataka amin'ireo mpamaky mba hanampy hamantatra azy. Andro vitsy taty aoriana, nisy ny tsaho niely momba ny anarany, ny asany izay lehiben'ny Basij, sy trosa any amin'ny banky izay voalaza fa amina tapitrisa dolara maromaro. Sady tsy voamarina no tsy azo antoka ny vaovao tahaka izany ary mety hisy voka-dratsy goavana ho an'izay nizara ny anaran'ilay lehilahy ahiahiana. Matetika maka ny toeran'ny tena zava-misy ny tsaho antserasera.
Tsy vao sambany no nisy sary nitarika korontana sy fanagadrana tao anatin'ny ady. Na izany aza, fivoarana vaovao tamin'ny fisamborana sy fanenjehana voasazy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny vaovao ifarimbonana antserasera izy ity.
Jereo ny fitantarana manokana ataon'ny Global Voices momba ny Fifidianana Iraniana 2009.
Tiorkia 21 ora izay
Iràna 3 andro izay